Suudaan oo shacabkeeda Yuhuudda ah ka codsatay inay dalka kusoo laabtaan - BBC News Somali
Suudaan oo shacabkeeda Yuhuudda ah ka codsatay inay dalka kusoo laabtaan
Image caption Daisy Abboudi
Xubnaha ka tirsan bulshada Yuhuudda tirada yare e kasoo jeeda dalka Suudaan, kuwaasoo tobannaan sano ka hor ka cararay waddankaas, ayaa laga codsaday inay dib usoo laabtaan.
"Suudaan waa dal xushmeeya kala duwanaanshaha diimaha", sidaas waxaa Axaddii yiri wasiirka diinta ee Suudaan ee cusub.
"Arrintan waxay ka dhacday dalalka kale ee ku yaalla bartamaha iyo Waqooyiga Afrika, sidaas awgeed ma aha wax aan horay loo maqlin, waa tallaabo aad u wanaagsan oo la billaabay", sidaas waxaa tiri gabar qoraa ah oo lagu magacaabo Daisy Abboudi, taasoo hooyadeed ay tahay Yuhuudda kasoo jeeda waddanka Suudaan.
Waxay BBC-da ku tiri: "Sababta ay aad ugu xiiso badan tahay khaasna u tahay waa inay yihiin Yuhuud isku jir ah oo kasoo kala jeeda dhammaan dalalka bariga dhexe, waxayna sidoo kale la qabsadeen hiddaha iyo dhaqanka Suudaan".
In badan oo ka mid ah dadka Yuhuudda ah ee Suudaan ayaa waddankaas tagay dabayaaqadii qarnigii 19-aad iyo horaantii qarnigii 20-aad, laakiin bulsho yar oo Yuhuud ah ayaa waddankaas ku nooleyd xitaa waqtigaas kahor.
Yuhuudda ayaa markii dambe isaga tagay dalkaas, maadaama lagu bartilmaameedsaday qalalaase dhacay wixii ka dmabeeyay markii Israa'iil la aasaasay, sida ay Ms Abboudia sheegtay.
"Waxaa jiray eedeymo dhowr ah - sida basaasnimo - dhammaantoodna waxay ahaayeen been abuur. Kadib sanadkii 1967-kii waxaa jiray dagaal lix maalmood socday oo lala galay Israa'iil, dhammaan raggii dhalinyarada Yuhuudda ahaa ee looga tagay Suudaan waa la xiray iyagoo aan wax dacwad ah lagu soo oogin, waxaana xabsiga lagu hayay maalmo, ilaa markii uu dagaalka dhammaaday laga sii daayay".
"Runtii markaas ayaa la qaatay go'aanka ku saabsan in qof walba oo Yuhuudda ku hartay Suudaan ahaa uu isaga tago halkaas".
Bulshada Yuhuudda ah ee ku nool Suudaan ayaa lagu qiyaasi jiray ilaa 1,000 ruux, laakiin intooda badan way isaga qaxeen waddankaas.
Muddo tobannaan sano ah ayaa dowladda ka jirtay Suudaan lagu dhaliilayay inay takoor ku sameyso dadka aan Muslimiinta ahayd ee u dhashay dalkaas.
Hase ahaatee, xukuumadda rayidka ah ee hadda laga yagleelay Suudaan ayaa u muuqata inay wax badan ka bbadaleyso siyaasadihii dowladdii milatariga ee muddada dheer ka arrimineysay Suudaan.
Image caption Cumar Al-Bashiir ayaa xukunka laga tuuray bishii Abriil
Bishii Abriil ee sanadkan ayaa xukunka laga tuuray madaxweynihii Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir, kaasoo ku dhawaad 30 sano xukunka hayay.
Isbaddalka ka dhacay waddanka ayaa ku yimid mudaharaad ay shacabku sameynayeen, oo markii hore ku billowday cabasho laga muujinayay sare u kaca maciishadda ama sicir bararka.